भूमिसम्बन्धी आयोगबारे मैले देखेभोगेको कुरा – Tharuwan.com
भूमिसम्बन्धी आयोगबारे मैले देखेभोगेको कुरा
प्रकाशित : २०७८ साउन २२ गते १०:२८
यो पनि पढ्नुस् : अदालतको निर्णय अर्को टीकापुर विद्रोहको संकेत
तर केपी ओली आफू ५ वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छु र आज जुन हर्कत मैले गरिरखेको छु भोलि अरुले गर्ने मौका पाउँदैनन भन्ने यतिचाहिँ बिश्वस्त थिए। तर विडम्बना उहाँले सोँचेजस्तो भएन। दुई तिहाई सत्ताको मातले उहाँभित्र यति धेरै दम्भ, इर्श्या, घमण्ड भरदियो कि ओली आफ्नै निरंकुश र अलोकतान्त्रिक ब्यवहार र प्रवृत्तिका कारण पार्टी र जनताबाट नाँगिदै अन्त्यमा सर्बोच्च अदालतले नै कानुनीरुपमा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरदियो।
अहिले जुन किसिमले यो आयोगको विषयमा तर्क बहस भइरहेको छ, यो एकदमै गम्भीर विषय हो। दलीय प्रतिशोध लिएर केपी ओली सरकारले खारेज गरी भूमि आयोग बनाउँदा कहीँ कतै विरोधका अवाजहरु किन उठेन? सबै कार्यविधि बनी कार्यान्वयनमा आइसकेको आयोग नाममात्र परिवर्तन गरी १६ महिनामा २२ करोड खर्च हुँदा पनि १ जना पनि सुकुम्वासी/भूमिहीनले लालपूर्जा पाउन सकेनन्, यसको मुख्य जिम्मेवारी को? २०५१ सालदेखि सुकुम्बासीहरुको समस्यालाई विभिन्न आयोग बनाइ जग्गाहरु वितरण गरिरहँदा पनि झन् सुकुम्बासीहरुको संख्या घट्नुपर्नेमा बढ्दै गैरहेको छ, यो समस्या राज्यले कहिलेसम्म थेग्ने हो? सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले जग्गा बाँडेरमात्र समस्या समाधान हुन्छ?
कम्युनिस्ट सरकार आउँदैमा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने र काङ्ग्रेस सरकार आउँदैमा नहुने जुन मनोवैज्ञानिक भ्रम छ। आज यही भ्रमको खेती गर्दै कतिपय राजनीतिक पार्टीहरुले सुकुम्बासीहरुलाई भोट बैंक बनाइराखेका छन्।
राज्यले लालपुर्जाको सपना बाँडिरहेको छ, तर सरकार परिवर्तनसँगै उनीहरुको सपना तुहिन्छ, यो सबै थाहा हुँदाहुँदै सरकारले संवैधानिक आयोग किन बनाउन सक्दैन?
जबसम्म यसलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गर्न सकिँदैन, जबसम्म बिष्णु पौडेलजस्तो नयाँ सुकुम्बासीहरु जन्मिरहन्छन्, तबसम्म वास्तविक सुकुम्बासीले न्याय पाउदैनन् । अब राज्यले वास्तविकता सुकुम्बासीको पहिचान गरी, बाँकी रोकिएका कामलाई निरन्तरता दिँदै ठोस समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ।
लेखक थरुहट थारुवान राष्ट्रिय युवाशक्तिका अध्यक्ष हुन्।